Mareykanka oo ugu baaqay Rooble iyo Farmaajo in ay xaliyaan khilaafkooda, diirradana la saaro doorashada – Kalfadhi
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay xalliyaan khilaafka haatan ka dhex taagan, si dib-u-dhac kale uusan ugu imaanin hannaanka doorashooyinka ee dalka.
“Wada-shaqeynta ka dhexeeysa madaxda Soomaaliya – gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble – waa lama huraan, si loo hubiyo in dalku si degdeg ah uu u dhammaystiro hannaanka doorasho ee socda,” afhayeenka waaxda arrimaha dibedda ee dalka Mareykanka Ned Price ayaa bayaan ku yiri.
“Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa halis ku ah inuu sii adkeeyo geeddi –socodkan, waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah oo nabad ah lagu xaliyo,” ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaa hadda waxaa laga dhex wadaa waan-waan la doonayo in xiisada lagu yareeyo, waxaana hoggaaminaya guddoonka Golaha Shacabka iyo madaxweynayaasha maamuladda Koonfur-Galbeed iyo Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirrada dalalka Nigeria iyo Indonesia